Clos de Los Siete 2016 – Wevino.store
Ita kuti cookies ishandise kushandisa motokari yekutengesa
Mirayiridzo inokosha kune mutengesi
Mutero unowanikwa. Shipping zvakaverengerwa pa checkout.
9,0 EUR FLAT YOKUTUNGAMIRIRA KUSVIRA KUNE MAINLAND EU COUNTIRES. TINOENDESA KUU.SA UK UK PAMWE CHETE.
kutsvaka Log in ngoro
Nhamba yezvinhu zviri mungoro yako: 0
Ngoro mutengo € 0.00
mhosho Nhamba inofanira kunge iri 1 kana zvimwe
Clos of Los Siete 2016
Yakagadzirwa nehunyanzvi kubva kumukurumbira wezano Michel Rolland, uyu akapfuma, akazara muviri, ane runako rwakaremerwa.
Mazai, akasviba-bheri michero, uye zvinyorwa zvechokoreti uye zvinonhuwirira zvinoita ichi chidimbu Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot uye Syrah vanobatanidza inonakidza uye yakasarudzika waini.
Ichi chitsvuku chemuArgentina tsvuku chakagadzirwa nenzira yemazuva ano naiye anozivikanwa weFrench mupi wezano, Michel Rolland, anove muridzi weClos de Los Siete. Inobatanidza nyama yakapfuma machira zvakanyanya.
Clos de los Siete ndiyo mhedzisiro yechiitiko chakaitwa neboka revanyowani veFrenchgrowers. Iyo iri pasi petsoka yemakomo eAndes, mumoyo weUco Valley, padunhu reVista Flores, Tunuyán. Minda yemizambiringa yakapararira kupfuura mahekita mazana masere nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi mairi.
Clos de los Siete minda yemizambiringa inowanikwa muzasi memakomo eAndes muArgentina. Ichi chitsvuku chiratidzo chakaitwa nenzira yemazuva ano naiye anozivikanwa weFrench mupi wezano, Michel Rolland, anove muridzi weClos de los Siete. Izvi zvinoratidza iyo Malbec yakasanganiswa zvakasiyana, iine makumi matanhatu neshanu Malbec, 54% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon, 13% Syrah, 8% Cabernet Franc uye 4% Petit Verdot, inofadza neboka rayo rinonakidza uye rakaoma.
Munguva yekukohwa, mamiriro akanaka akave neakanaka mashuga uye akaiswa acidity mumazambiringa, zvichikonzera muchero wakanaka, wakanaka-mushe. Iyi vintage inoratidza hunyoro nyowani uye nekunakisa kusungwa, ichiratidzira kusarudzika kwekukwegura kunogona kuitika.
Iyo bhuruu hue inoratidza waini isinganzwisisike, inonyengera, isingabviri kuramba, inoyeudzira dense, dema mariki, ane zvinyorwa zvechokoreti, zvinonhuwira uye hwakanyanya hwekunhuhwirira kwakanaka. Mumukanwa, waini inoyemurika neyakagadzika yayo, yakatenderedzwa tangi uye ane nyama ine hunhu, inotungamirwa neyakajeka acidity. Huru hwekunhuhwirira pane hwakareba, hunonakidza kupedzisa kunamira zvakanyanya kune zvinonhuwira pane michero uye kuratidza iyo yeCabernet Franc yezvinyorwa mumusanganiswa.
mugove Share on Facebook
Tweet Tweet musi Twitter
kubayirira naro Pin musi Pinterest
Haikwanisi kutakura kuwanikwa kwepikicha
Strada paRazzaretto 2, Muggia, Trieste, 34015, Italy
Terms uye mamiriro;
General Terms uye Mamiriro
Kudzoka uye Kudzorera
Akabvumidzwa Mugovanisi wewaini
Kusarudza sarudzo kunoguma nokuzara peji.
Dzvanya kiyi yenzvimbo uye museve makiyi kuti uite sarudzo.